भिडियो Archives - Enepal Serofero
ॐ….गणेशय नम: विश्वमा नै दुर्लभ सेतो हात्ती, देखाउछ विभिन्न हर्कद गरेर मन परे सेयर गर्नुहोस् ॐ….गणेशय नम: विश्वमा नै दुर्लभ सेतो हात्ती, देखाउछ विभिन्न हर्कद गरेर मन परे सेयर गर्नुहोस् यो पनि पढ्नुस परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलिङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिंगलाई पुजा गर्छन् । सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्रमबाट बच्नुहोस्ः लिंगको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ । शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिंगको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्रीलिंगको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छ । र नपुसंक लिंगको अर्थ नपुसंकको प्रतीक भन्ने हुन्छ । आखिर के हो त शिवलिंग ? शुन्य, आकाश, अनन्त, ब्रह्माण्ड र निराकार परमपुरुष भएकाल
एजेन्सी- गाईले मात्रै एक आँखा भएको बाच्छीलाई जन्मदिए पछि पूर्वी भारतमा पूजा गर्नेहरुको भिडनै लागेको छ। एउटा मात्र आँखा भएको बाच्छी भगवानको स्वरूप हुने भन्दै पूजा गर्ने र हेर्न आउनेहरुको भिडनै लागेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले समाचार लेखेका छन्। घटना पश्चिम बंगालको बर्धमान जिल्लाको रहेको छ। शारीरिक दुर्वलता सहित जन्मिएको त्यस बाच्छीलाई स्थानीयहरुले भगवान अवतारको संज्ञा दिंदै पूजा गरेका हुन्। गर्भमा हुँदा साइक्लोपिया नाम रोगबाट ग्रसित भएको कारण यस्तो जनवार जन्मने पशुविज्ञहरुको भनाइ छ। उनीहरुको अनुसार यस्तो जेनेटिक दुर्वलताको मानिस र जनवार दुवैमा हुन सक्छ। यस दुर्वलताको कारण गर्भमा हुंदा मस्तिस्क विकासमा असर गर्ने गर्छ। जसको कारण दाहिने र देब्रे मस्तिक छुट्टिएर विकास हुन पाउंदैन। यस्तो अवस्थामा एउटा मात्र आँखा, जोडिएको आँखाको नानि जस्ता दुर्वलताहरु देखा पर्छन्।
एक महिना लामो स्वस्थानी ब्रतकथा आजबाट सुरु भएको छ । हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूणिर्मादेखि माघ शुक्ल पूणिर्मासम्म विवाहित महिलाले पतिको दिर्घायुको कामना गरेर र अविवाहतिले असल पति पाउँ भनी स्वास्थानी ब्रत बस्ने गर्दछन् ।स्कन्द पुराणका अनुसार सत्ययुगमा भगवान् विष्णुको सल्लाहमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउँ भनी बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई निराहार व्रत बसेपछि मनोकांक्षा पूरा भएको थियो । व्रतालुहरूले पूजाआराधनापछि श्री स्वस्थानी ब्रतकथा बाचन गर्ने र श्रवण गराउने चलन छ ।हिन्दू महिलाहरु व्रत अवधिभर शारीर शुद्ध गरी मध्याहृनकालमा एकपटक मात्र भोजन गर्ने गर्छन् । राजधानीबाट १७ किलोमिटर उत्तर पूर्वमा अवस्थित साँखुमा रहेको शाली नदी किनारमा महिला तथा पुरुष स्वस्थानीको पूजाआराधना गर्दै व्रत बस्ने परम्परा छ । मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वासका साथ एक महिनासम्म बसिने यो व्रत विशेषगरी पौराणिक धर
दुधको चिया शरीरमा गएर यसरी बन्छ विष अरु बेलामा भन्दा जाडो समयमा नेपालीहरु बढी चिया पिउँछन्। अधिकांश मानिसहरुले आनन्दको लागि, शरीर न्यानो गराउनको लागि चिया पिउने गर्छन्। फेरि चियाको (कालो चियाको) स्वास्थ्यमा फाइदाहरू पनि टन्नै छन्। प्राचीन समयमा चीन, भारत र नेपाल लगायत एसियाली भू-भागहरूमा कालो चियालाई औषधीको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गर्दथे। चियामा हाम्रो स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने खालका धेरै तत्वहरू पाइन्छन्। विशेष गरी कालो चियामा प्रशस्तै एण्टिअक्सिडेन्ट र भिटामिन पाइन्छन्। यसले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुको साथै, रगतमा सुगरको मात्रालाई नियन्त्रण गर्ने, कोषका हुने क्षयलाई रोक्ने, मधुमेहबाट बचाउने साथै मुटुसम्बन्धी रोगबाट पनि बचाउँदछ तथापी, त्यस चियामा अलिकति पनि दूध मिस्सियो भने, अब त्यसले फाइदाभन्दा बढि बेफाइदा गर्दछ। तर कसरी?
पोखराको मालेपाटनमा ट्यांकरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३ दानाकी बृन्दा थापा मगरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । ग १ ख २८९६ नम्बरको पानी बोक्ने ट्यांकरले मंगला गाउँपालिका–४ झाँक्रीपानीका धनबहादुर छन्त्यालको मोटरसाइकल र अर्को नम्बर नखुलेको एक मोटरसाइकल गरी दुई मोटरसाईकल ट्यांकरको मुनी चेपिएको पोखराका प्रहरी नायव उपरिक्षक रविन्द्र गुरूङले बताए ।उनका अनुसार ट्याङ्कर नजिकै रहेका दुईजना घाईतेलाई तत्कालै उद्धार गरी अस्पतालमा लगिएको थियो । मृतक थापामगर हिस्तानको घराम्दी आधारभुत विद्यालयकी शिक्षक समेत हुन् ।मृतक थापामगरको शव गण्डकी अस्पतालको शव गृहमा राखिएको छ । भिडियो हेर्नुहोस
भनिन्छ, माया–प्रेमलाई उमेरले छेक्छ, न जातले, न रूपले, न भौगोलिक दूरीले । मन मिलेपछि प्रेममा सबै कुरा सम्भव हुन्छ तर जवानीमा अन्य कुरामा ध्यान नदिई गाँसिएका सम्बन्ध लामो समय टिक्न नसकेका कैयौं उदाहरण हाम्रा सामु छन् । यसरी नै गरिएको एउटा निर्णयलाई परिवर्तन गर्न खोज्दा पोखरामा एउटा ठूलो घटना घटेको छ । घटनाका प्रमुख पात्र अन्तरजातीय विवाह गरेका सञ्जीवबहादुर नेपाली र उनकी श्रीमति सोनम रेग्मी हुन् । सञ्जीवबहादुर नेपालीका आफन्तहरूको भनाइ तथा उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका सामग्री हेर्दा उनी सोनम रेग्मीलाई औधी माया गर्थे । भिडियो हेर्नुहोस
प्रस्तावित कानुन अनसार इच्छा विपरित अलग बस्न बाध्य बनाए एकदेखि तीन महिनासम्म जेल वा १० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनेछ । साथै मागेर खान लगाए तीन वर्षसम्म कैद वा ३० देखि ९० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। त्यसै गरि आमा बाबुलाई घरबाट निकालेर बेवारिसे बनाए एक देखि ५ वर्षसम्म जेल वा एक देखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने गरिएको छ । छोराछोरीले घरबाट निकालेपछि बाबु-आमा सडकमा पुगेको धेरै घटना छ । कतिपय आश्रममा पुगेका छन् भने कतिपय सडकमै मागेर गुजारा दयनीय जिबन बिताइरहेका छन् । अब भने यस्ता छोराछोरीहरुले जेल को हावा खान पर्ने भएको छ। सरकारले यस्ता काम गर्नेलाई सजाय दिने ब्यबस्था सहित ऐन संसोधन गरेको हो। उक्त ऐन अनुसार छोराछोरीले आफ्नो कमाइको निश्चित रकम आमाबाबुको लागि छुट्टाउनु पर्ने ब्यबस्था गरेको छ । साथै आमा बाबुलाई इच्छा विपरित अलग बस्न बाध्य बनाए, मा
हे भगवान यस्तो पिडा कसैलाई नदेउ,मेरी छोरीलाई भगवानले चाँडै चुँडिदिए,आमा अझै अचेत (भिडियो हेर्नुहोस )
शोकमा डुबेको छ पदयात्रामा एमबीबीएस अध्ययनरत छोरी गुमाएको परिवारकाठमाडौँ- अध्ययनमा जति अघि थिइन् उनी, मायाले परिवार, आफन्त र छिमेकीको मन पनि उत्तिकै जित्न सफल थिइन्।कलिलै उमेरमा सेवा भाव, आँट, आत्मविश्वास र इमान उनका जीवन सिद्धान्त बनेका थिए।डाक्टर बनेर मृत्यु चिहाइरहेका वा त्यसको जोखिममा परेका जीवन फर्काउने धोको थियो उनको।बाँकी समय पनि त्योसँगै जोडिएका सामाजिक सेवामा आफूलाई समर्पित गर्न चाहना थियो।आफ्नोभन्दा पनि अरुको खुसीमा आफूलाई समाहित गर्न मन पराउने टोखा- ५ की २१ वर्षीया दीपना उप्रेतीको त्यो धोको र चाहना कास्कीको मर्दी हिमालले अपत्यारिलो ढंगले खोसिदियो सँधैका लागि। भिडियो हेर्नुहोस - From : Dailylokmandu.com
डोजरले बाटो खन्दा ढुङ्गामा गणेश भगवानको रुप देखिए पछि…एकपटक भिडियो हेरौ दर्शंन गरौ
भिडियो हेर्न तल जानुहोला यो पनि पढ्नुहोस यस्तो अनौठो चलन, जहाँ ‘यौन प्यास मेटाउन’ ३२ रुपैयाँमै युवती किन्न पाइन्छ ! संसारमा कुनै मानिसको मोल कति होला ? अहिलेसम्म मानिसको मूल्य तोक्न सकिएको छैन । तर, हाम्रो छिमेकी देश भारतमा भने मात्रै ३२ रुपैयाँमा मानिसको बिक्री हुन्छ भन्दा पत्याउन मुकिस्ल पर्छ । तर, यो सत्य हो । भारतको एउटा गाउँमा २० रुपैयाँ भारुमा छोरीचेली किनबेच हुने गर्छ । हो, भारतको मध्यप्रदेशस्थित शिवपुरी नामको गाउँमा यस्तै चलन चल्दै आएको छ । यस गाउँमा २० रुपैयाँ भारुको टिकटमा छोरीचेलीहरूको किनबेच चल्दै आएको छ । भारतीय अनलाइन मिडियामा प्रकाशित खबरअनुसार गाउँमा परम्पराका रूपमा चली आएको धडिचा नामक कुप्रथाका कारण सो गाउँका छोरीहरू यस्तो अमानवीय कार्यको सिकार भइरहेका छन् । यो बताइएको छ कि, गाउँमा चेलीहरूको खरिद–बिक्री गर्ने धडिचा नामक प्रथा चल्तीमा छ । यो चलनअनुसार क
बिहेको भोलीपल्ट कृष्णको २ हात र १ खुट्टा काटियो तर श्रीमतिले साथ् अर्कैसँग बिहे गर भन्दा पनि छोडिनन् [भिडियो हेर्नुहोस ]
हैर्दा सून्दा निकै दुख लाग्ने यो घटना । कति सम्म निर्दयी हुने रहेछ दैब पनि । आफुले काम गरेर पैसा कमायर बर्षौ माया गरेर बिहे गरेको श्रीमतिलाइ स्टाफ नर्स बनाउछु भनेर पैसा कमाउन आफ्नै देशमा बिजुलिको काम गर्दै आयका कृष्ण ओलि को यथार्थ घटना हो यो । कृष्ण भन्छन मलाइ मारिदियको भय पनि हुने थियो आखिर बाचेर पनि केही गर्न सक्दिन यद्यपि आँखा बाट झरेका मेरा यी पानी जस्तै आसुहरु पुछ्न पनि सक्दिन । म यतिमै खुसी छु कि मलाई आफ्नो ज्यान भन्दा नि धेरै माया गर्ने श्रीमति ( रुपा ) पायको छु । उनको यो साहस देखेर मेरो पनि हिम्मत बड्छ । भिडियो हेर्नुहोस - From : Dailylokmandu.com
विदेशमा रहेका श्रीमानसंग सेक्स भिडियो कल गर्दै धादिंगकी १८ बर्षिय युवती.लिक भएको क्लिप (14,933)
मगर्नी भाउजूको कथा (13,602)
वाइन पिउँदै भाउजु संग बितायाको त्यो रात (11,508)
राजधानीमा अचम्मको बलात्कार – सुन्दा तपाइको होस् उड्छ! (10,065)